चुनाव फेरि सार्नुपर्ने राजपाकाे माग ! – NepalayaNews.com
चुनाव फेरि सार्नुपर्ने राजपाकाे माग !
२७ जेष्ठ २०७४, शनिबार १५:३२
काठमाडौँ, जेठ २७ गते । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई दोस्रो चरणअन्तर्गतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउनेबारे सत्तारुढ प्रमुख दलले अन्तिम कसरत गरिरहेका छन् ।
२० महिनापछि बोइङ ७३७ म्याक्सले अमेरिकामा उडान सुरु गर्दै २७ जेष्ठ २०७४, शनिबार १५:३२
डोनल्ड ट्रम्प चार वर्षपछि फेरि चुनाव लड्नसक्ने ! २७ जेष्ठ २०७४, शनिबार १५:३२
२०२४ को चुनावी तयारी थाल्ने ट्रम्पको योजना, बाइडेनको सपथकै दिन सुरु गर्न सक्छन् अभियान २७ जेष्ठ २०७४, शनिबार १५:३२